पहुँचवालालाई मनलाग्दी पास, काठमाडौँ भित्रियो कोरोना ! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/पहुँचवालालाई मनलाग्दी पास, काठमाडौँ भित्रियो कोरोना !
काठमाडौं – लकडाउन उल्लंघन गर्दै जथाभावी मानिस भित्रिन थालेपछि काठमाडौं उपत्यका कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिममा परेको विज्ञले औंल्याएका छन्। पछिल्लो साता कोरोना भाइरस फैलिएका ठाउँबाट धेरै मानिस काठमाडौं उपत्यका भित्रिएपछि संक्रमणको खतरा बढेको हो। मंगलबार काठमाडौंमा एक र भक्तपुरमा दुईजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले कोरोना संक्रमित जिल्लाबाट आउने व्यक्तिहरु दिनदिनै बढेकाले काठमाडौं उपत्यका कोरोनाको उच्च खतरामा रहेको बताए। उनले कोरोना संक्रमित जिल्लाबाट काठमाडौं उपत्यका छिरेकालाई क्वारिन्टिनमा राख्ने व्यवस्था नहुने हो भने यहाँ पनि कोरोना फैलिन सक्ने बताए। ‘पछिल्लो समय कोरोना संक्रमित बढी देखिएका जिल्लाबाट धेरै मानिस काठमाडौं प्रवेश गरेको देखिन्छ। उनीहरूलाई निगरानीमा राखेर परीक्षण नगरे संक्रमण फैलिने सम्भावना प्रबल छ’, कार्कीले भने, ‘काठमाडौंमा हरेक क्षेत्रमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड निर्धारण गरी कडाइका साथ पालना गराउनुपर्छ तर यसतर्फ काम गर्न ढिलाइ भइसकेको छ। यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले काठमाडौंमा बाहिरबाट भित्रिनेको संख्या बढेकाले खतरा बढ्दै गएको बताए। उनले उपत्यकामा भित्रेका मानिसलाई थप कडाइ र निगरानी बढाउन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे। ‘कोरोनाको उच्च खतरामा काठमाडौं छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसैलाई ध्यानमा राखेर नमुना परीक्षण दायरा बढाउने तयारी थालेको छ’, प्रवक्ता देवकोटाले भने, ‘परीक्षणसँगै स्थानीय तहसँगको समन्वयमा संक्रमित जिल्लाबाट आएका मानिसलाई क्वारिन्टिनमा राख्नुपर्छ।’